Inona no atao hoe batemy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny fiangonana > Inona no atao batisa?
Ny batisa dia fombam-pivavahana fanombohana kristiana. Ao amin’ny Romana 6, i Paoly dia nilaza mazava fa io no fombafomba fanamarinana amin’ny alalan’ny fahasoavana amin’ny alalan’ny finoana. Tsy fahavalon'ny fibebahana na finoana na fiovam-po ny Batemy fa mpiara-miasa. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia marika famantarana eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny valintenin'ny olona (fanehoan-kevitra). Iray ihany ny batemy (Efes. 4: 5).
Misy lafiny telo amin'ny fampidirana izay tsy maintsy ho feno amin'ny fampidirana Kristiana mba ho feno. Ny lafiny telo rehetra dia tsy voatery mitranga amin'ny fotoana mitovy na amin'ny filaharana iray. Nefa dia ilaina avokoa ny rehetra.
Ny fibebahana sy ny finoana - no lafiny maha-olona eo amin'ny fampidirana Kristiana. Manapa-kevitra ny hanaiky an'i Kristy izahay.
Ny batisa no lafiny ara-pivavahana. Ny mpilatsaka hatao batisa dia ekena ao amin'ny vondron'olona hita maso ao amin'ny Fiangonana Kristiana.
Ny fanomezana ny Fanahy Masina - dia ny lafin'andriamanitra. Manavao antsika Andriamanitra.
Batisa amin'ny Fanahy Masina
Misy fanamarihana 7 momba ny batisa miaraka amin'ny Fanahy Masina ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ireo rehetra ireo voalaza ireo dia mamaritra - tsy misy mampiavaka - ny fomba maha lasa Kristianina. Jaona nanao batemy olona hibebaka, fa i Jesosy kosa nanao batisa tamin'ny Fanahy Masina. Izany no nataon'Andriamanitra tamin'ny Pentekosta ary mbola hatrizay. Tsy misy na aiza na aiza ao amin'ny Testamenta Vaovao ny andian-teny ampiasaina ao na miaraka amin'ny Fanahy Masina hamaritana ny fampitaovana ireo manana hery manokana izay efa kristiana. Ampiasaina ho toy ny andian-teny fanoharana hoe ahoana no fomba maha Kristiana azy.
Ireto no voatonona:
Mark. 1: 8 - Ao amin'ny Matth ny andalan-jaza. 3:11; Luk. 3:16; Jaona 1:33
Asa 1: 5 - izay nanehoan'i Jesosy ny tsy fitovian'ny batisan'i Jaona talohan'ny Kristianisma sy ny batisany voalohany tao amin'ny Fanahy Masina, ary nampanantena fahatanterana haingana izay nitranga tamin'ny Pentekosta izy.
Asan'ny Apostoly 11:16 - izany dia manondro azy io indray (jereo etsy ambony) ary mbola fampidirana mazava indray.
1. Kor. 12:13 - dia manambara mazava tsara fa ny Fanahy no manao batisa voalohany ho an’i Kristy.
Inona ny fiovam-po?
Misy fitsipika 4 ankapobeny izay mihatra amin'ny batisa tsirairay:
Andriamanitra dia mikasika ny feon'ny fieritreretan'ny olona iray (misy ny fahatsapana ny filana sy/na ny meloka).
Andriamanitra dia manazava ny saina (fahatakarana fototra ny hevitry ny fahafatesana sy ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty).
Andriamanitra dia mikasika ny sitrapony (tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny tsirairay).
Manomboka ny fizotran'ny fiovana Andriamanitra.
Ny fiovam-po kristiana dia manana endrika telo ary tsy voatery maneho izany indray mandeha izany.
Fiovam-po / fitodihana any amin'Andriamanitra (hitodika any amin'Andriamanitra isika).
Fiovam-po / fitodihana any am-piangonana (fitiavana ny mpiray finoana kristiana).
Fiovam-po / mitodika amin'izao tontolo izao (miverina isika mba hanatratra ny ivelany).
Rahoviana isika no miova fo?
Ny fiovam-po dia tsy manana endrika telo ihany, ary misy dingana telo koa:
Niova fo isika araka ny torohevitr'Andriamanitra Ray taorian'ny namaritana antsika mialoha tamin'ny fitiavana fa voafidy ao amin'i Kristy talohan'ny nanorenan'izao tontolo izao (Efes. 1: 4-5). Ny fiovam-po kristiana dia miorim-paka amin’ny fitiavana voafidy an’Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay mahalala ny farany hatrany am-piandohana ary ny fandraisana andraikitra dia mialoha hatrany ny valin-tenintsika (valiny).
Niova fo isika rehefa maty teo amin'ny hazofijaliana i Kristy. Izany no fomba niverenan'ny olombelona tamin'Andriamanitra rehefa noravana ny fisarahan'ny fahotana (Efes. 2:13-16).
Niova fo isika rehefa tena nampahafantatra antsika ny zavatra ny Fanahy Masina ary namaly izany isika (Efes. 1:13).